मत्स्यपोखरीमा कार्तिक २७ देखि धार्मिक, साँस्कृतिक र साहित्यीक कार्यक्रम हुँदैछ, जाने होईन त ? हेर्नुहोस भिडियो « Emakalu Online
मत्स्यपोखरीमा कार्तिक २७ देखि धार्मिक, साँस्कृतिक र साहित्यीक कार्यक्रम हुँदैछ, जाने होईन त ? हेर्नुहोस भिडियो
चिचिला । चिचिला गाउँपालिका ४ मत्स्यपोखरीलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्दै लगेको गाउँपालिकाले त्यस परिषरमा राखिएको शिवलिङ्ग र बसाहको प्राणप्रतिष्ठा गरिने भएको छ । कार्तिक २७ गते सनिबारबाट पाँच पण्डितहरुले विधिपूर्वक एक हप्तासम्म पुजा गरि प्राणप्रतिष्ठा गरिने भएको हो ।
समापनको दिन मंरि ३ गते साहित्यीक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । चिचिला गाउँपालिकाको सहयोग तथा मकालु साहित्य समाज संखुवासभाको आयोजनामा कार्यक्रम हुने भएको हो । घुम्टो भित्रकी सुन्दरी, चिचिला नगरीः साहित्य सँस्कृतिको परी, पर्यटकीय मत्स्यपोखरी नाराका साथ महोत्सव गर्न लागिएको हो । महोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गरुङ रहनेछन् ।
यस्तै, बरिष्ठ साहित्यकार एबम् पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल, भरत गुरागाई, कविता राई लगायतका दर्जन कवि कवयित्रीको उपस्थिति रहनेछ । जिल्लाका चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ ।
कार्यक्रम स्थलसम्म पुग्न र त्यस क्षेत्रको पुर्व जानकारी लिन हामीले तयार गरेको एक भिडियोले तपाईलाई सहजता मिल्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हेर्नुहोस उक्त भिडियो ।